Ulwazi lokuthengwa kwemishini: amaqhinga amane wokukhetha ubhaka ongaphandle - iDongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Ikhaya > Izindaba > Izindaba Zemboni > Ulwazi lokuthengwa kwemishini: amaqhinga amane wokukhetha ubhaka ongaphandle
Abangane abaningi bezokuvakasha bathi baqale ukujoyina amarenki ngoba babona umuntu ethwele ubhaka omkhulu. Ngemuva kokuthandana kancane ngaphandle, ngithole ukuthi ubhaka ungomunye wemishini ebaluleke kakhulu yezemidlalo yangaphandle. Ubhaka ongaphandle ofanelana nawo awukwazi ukuthuthukisa nje kuphela imidlalo yezemidlalo yangaphandle, kepha futhi unciphise umzamo wokuhamba.
Icebo lokukhohlisa 1: Khetha ubhaka ngokwendlela yohambo
Ukuvakasha kosuku olulodwa, ukuhamba ngebhayisikili, imisebenzi yezintaba, khetha ubhaka ngaphansi kwamalitha angama-30. Okhempini izinsuku ezimbili kuya kwezintathu, ungakhetha ubhakha osebenza ngamalitha angama-30-40, njenge-KingCamp ubhaka wangaphandle we-KB3291, osindayo ngesisindo futhi osebenza ngezindlela eziningi. Inesistimu yokulungisa isifuba esishelelayo, isistimu yokulungisa umoya emisiwe, isistimu yokulungiswa kwamabhande asheshayo, nokugcinwa okhalweni. Kuyinto elula, esebenzayo, ephephile futhi ekhululekile.
Okokuhamba izintaba izinsuku ezingaphezu kwezine, kufanele kubekwe imishini yangaphandle njengamatende, izikhwama zokulala, namata okuqinisekisa umswakama. Ungakhetha ubhakha wamalitha angama-45 noma ngaphezulu. Ngaphezu kwalokho, ojosaka abasetshenziselwa imisebenzi yasensimini ejwayelekile bahlukile kulabo abasetshenziselwa ukukhuphuka izintaba eziphakeme. Ojosaka abasetshenziselwa izintaba abanazo izingxenye eziningi. Labo abathanda intaba kufanele bayinake.
Iqhinga 2: Khetha ubhaka ngokuya ngenani labantu
Ukuze uphume wedwa, ungakhetha ubhaka wamalitha angama-25 kuye kwangama-35. Lapho ukhipha umndeni nezingane eholidini, ngokombono wokunakekela umndeni, udinga ukukhetha ubhaka ongaba ngamalitha angama-40, futhi kunezinhlelo eziningi zangaphandle ezisiza amalungu omndeni ukuthi aphathe izambulela, amakhamera, ukudla nezinye izinto.
Icebo 3: Khetha ubhaka ngokobude bomzimba wakho
Ngaphambi kokukhetha ubhaka, okokuqala udinga ukukala ubude bomzimba wakho ongemuva, okungukuthi, ibanga ukusuka ekuphumeni komgogodla womlomo wesibeletho kuya emgogodleni wokugcina we-lumbar. Uma ubude besifuba bungaphansi kuka-45 cm, kufanele uthenge isikhwama esincane. Uma ubude be-torso buphakathi kuka-45-52 cm, kufanele ukhethe isikhwama esiphakathi nendawo. Uma i-torso yakho ingaphezu kwama-52 cm, kufanele ukhethe isikhwama esikhulu.
Izinga lokubhekisisa ukuthi izinkalo nemilenze kufanele kubonakale ngemuva lapho uphethe ubhaka. Uma ubona ubhaka omkhulu nemilenze emibili engezansi, akulungile futhi kuyingozi.
Trick 4: Khetha ubhaka ngokobulili
Ngenxa yezinhlobo ezahlukahlukene zomzimba namandla athwala umthwalo wabesilisa nabesifazane, ukukhetha ojosaka bangaphandle nakho kwehlukile. Ukukhishwa isikhashana kosuku olulodwa noma ezimbili, ubhaka wabesilisa nowesifazane onamalitha angaba ngu-30 wenele. Ukuhamba ibanga elide noma ukukhempa izinsuku ezingaphezu kwezingu-2 kuya kwezingu-3, ​​lapho ukhetha ubhakha wamalitha angama-45 kuye kwangama-70 noma ngaphezulu, abesilisa ngokuvamile bakhetha ubhaka ongama-55 wamalitha, kanti abesifazane bakhetha ubhaka wamalitha angama-45.
Ngaphezu kwalokho, isitayela nokunethezeka kobhaka kumele kuhlolwe uqobo ngaphambi kokukhetha. Gwema ukuthinta ifreyimu noma iphakethe eliphezulu uma ubheka. Zonke izingxenye zobhakha ezithinta umzimba kumele zibe nokuthanela okwanele, ifreyimu yangaphakathi kanye nemicu yobhaka. Intambo kufanele iqine. Naka ngokukhethekile ukushuba nekhwalithi yemichilo yamahlombe, bese ubheka ukuthi ngabe kukhona yini imichilo yesifuba, imichilo okhalweni, imichilo yamahlombe, njll.
Kwedlule:Ojosaka abahamba izintaba abahamba phambili: ukujikeleza okuphelele kowe-2021
Olandelayo:Kukhona ikhono lokugcina izikhwama zakho ezinegama elikhulu